सरकार ! चौधरी समुहले कर छली रहने ? कर छली गर्नेलाई कारबाही गर्ने हुँकार (पढ्नुहोस् अन्य ५ समाचार)
नेपालमा पहुँच र पैसा भएपछि कर छली गरेर देश डुवाएपनि सरकार भने रमिते बनेर बसेको छ । कर राजस्व छली गरेर माथिकालाई सेटिङ मिलाएपछि गुणस्तहिन सामान बिक्री गरेपनि उच्च व्यापारी हुने र जनता जति लुटे पनि सरकार भने सो बारेमा कुनै ध्यान दिदैन र आफ्नो पदिय दायित्व भुलेर गुलामी गर्न पुग्छन् सरकारी कर्मचारी त्यसमा पनि सचिबहरु । यसरी धनुष्टकार बनेर पुग्ने गर्छन् त्यो गुलामी स्थल हो यो देशमा व्यवसाय चलाएर कर नतिरी पहिलो नम्बरमा परेका विश्वका धनी विनोद चौधरीको कम्पनी चौधरी ग्रुप ।
लुटको साम्राज्यमा को को होलान खेलाडी भन्ने भ्रम पाल्न आवश्यक नै छैन् । नेपालमा एक से एक नाफाखोरहरुको विवरण यसअधि पनि सार्वजनिक गरि सकेको छु । त्यसमध्य पनि चौधरी समुहले यो देशमा जे गरे पनि अब सरकारले छुट नै दिने रणनीति तय गरेको प्रमाणित समेत भएको छैटौं कर दिबसमा । राजधानी लगायत देशभर कर दिवस मनाएको छ ।
सवैलाई करको दायरामा ल्याउन सो कर दिबस मनाएको भन्दै ठूलो भाषणबाजी समेत भयो काठमाडौंमा तर, कर छली गर्नेमाथी त्यसमा पनि सान करदातालाई ठाँउको ठाँउ कारबाही गर्ने सरकार ठूला करदाता त्यसमा पनि चौधरी समुहलाई भने कारबाही गर्ने आट् गर्न सकेको छैन । अनी भाषणमा भने हुँकार दिए कर छली गर्नेलाई कारबाही गरेर छाड्छ सरकारले ।
नेपाललाई कर्मक्षेत्रको रुपमा प्रयोग गर्दै बैंद्य अबैंद्य कारोबार गरेर देशलाई लुट्न सफल घरानीय व्यवसायीहरु अहिले देशको अर्थतन्त्रनै ढुबाएका छन् । आफुलाई विश्वको धनीको सूचीमा रहेका चौधरी ग्रुपको प्रमुख विनोद चौधरीले देशमा सक्दो कर छली गरेर अर्वाैैं रुपैयाँ कमाएपनि उनी नेपालको कर विवरणको सूचीमा भने अन्त्य तिर रहेका छन् । उनले सरकारी कर्मचारीलाई कमिशन र मासिक तलव कै व्यवस्था गरेर नक्कली कर विवरण बुझाएको कागजात अर्थमन्त्रालयमै बसेर तयार गर्ने समेत गर्दैआएका छन् ।
सो विवरण तय गरे पछि चौधरीले मासिक ३ लाख रुपैयाँ दिएर नेपालमा कर बुझाएको कागजात बोकेर विदेश पुग्छन । अनी उनी कतै पनि कर तिदैनन् । चौधरीले तयार पारेको कर बुझाएको विवरण पत्रमा सरकारी छाप र सही अर्थमन्त्रालयभित्रै लगाउने गरेका छन् । बहालवाला अर्थसचिब, राजस्व सचिबले मुख्य भुमीका खेल्ने गरेका छन् ।
देशमा मासिक १० अर्ब रुपैयाँ कर नबुझाउने तर सांसद बन्नलाई भने करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्न तयार चौधरीले भन्ने गरेका छन् देशलाई आर्थिक समृद्धि बनाउन दलमा प्रबेश गरेको । जसले देशलाई बुझाउनु पर्ने कर छली गरेर अकुत कमाउदै देश ढुवाउदै आएका छन् उसले देशको आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने यो चर्चामाथी अहिले चर्को बहस सुरु भएको छ । तर चौधरी भने कर छलीको विषयलाई छायाँमा पार्न आफैले तयार गरेको अन्तरवार्ता र लेख छपाउदै आएका छन् ।
र सोही मिडिया हाउसले सान करदातालाई हदै सम्मको कारबाही हुनु पर्ने भन्दै सम्पादकिय लेख्न भ्याउछ तर चौधरीले कर छलीको विषयमा एक शव्द नलेख्नुले पनि प्रष्ट भएको छ चौधरीको कर छलीको योजना कति र कहाँसम्म रहेको छ भन्नेमा ।
चौधरी समुहले कर छली गरेको बारे लेखेपछि यो देशको टाईकुन मिडिया हाउसका बरिष्ठ पत्रकार भन्न रुचाउने एक समुहबीच चौधरीको छलफल समेत भयो ? गोप्य रुपमा प्राप्त सूचना अनुसार चौधरीले सोधेका थिए, मेरो विरुद्धमा लेख्ने कतिको पहुँचवाला हो ? यति सोधेपछि एक बरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भन्न रुचाउने मेरा एक मित्रले भने, उसले केही गर्न सक्दैन लेख्छ केही महत्व राख्दैन नडराए हुन्छ हजुर ? हामी छौनी हजुरकै आदेश अनुसार के गर्नु परो र ? यो देशमा चलेका अनलाईनमा समाचार अन्तरबार्ता हामी छापी दिने छौं । भन्दै गरेको सम्बाद समेत भएको थियो ।
सरकारले साना करदाताहरुले प्रत्येक महिनाको २५ गते भित्र आफ्नो व्यवसायको सवै हर हिसाब सम्बन्धित राजस्व कर कार्यालयमा नबुझाएमा र समयसिमाभित्र कर चुक्ता नगरे तत्काल कारोबार रोक्का र अन्य कारबाही गर्न सक्ने आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता त्यसमा पनि चौधरी समुहमाथी किन करको विवरण माग गर्दैन र अन्यको नाम सार्वजकिन गरि रहदाँ चौधरी समुहको किन नाम सार्वजनिक गर्न सक्दैन सरकार ? अहिले यस्ता प्रश्न सरकारप्रतिनै तेर्सिएका छन् ।
तर सरकारले न सो बारे सुनुवाई गरेको छ न चौधरीलाई कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान नै गर्न सकेको छ । यसरी एकै नियममा पनि फरकफरक व्यवहार गर्ने अन्य करदाताले सरकारलाई किन कर बुझाउने भन्ने प्रश्न समेत अहिले टड्कारो रुपमा उठेको छ । कम्पनीले अत्याधिक मंहगोमा बिक्री गर्र्दै आएको विभिन्न ब्राण्डका सामानको मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट), आयकर र राजस्व समेत नक्कली विलमार्फत कारोबार गर्ने गरेका छ । सो नक्कली विलबाट अबैध कारोबार गर्न सूरु गर्ने पहिलो कम्पनी हो चौधरी समुह ।
चौधरी, ज्योति, गोल्छा, खेतान, विशाल ग्रुप हाम्रो देशको प्रतिष्ठित कम्पनीको रुप लिने गरिन्छ । यि नै समुहले देशमा सक्दो सरकारी सुबिधा लिएका छन । उनीहरुले सरकारी ढुकुटीमा बुझाएको कर भने नगन्य रुपमा रहेको छ । यो प्रतिष्ठाको साम्राज्य लुटको पृष्ठभूमिमा टिकेको पाइएको छ । मन्त्री र अनुगमनमा आउनेलाई मिलाएपछि जति मुनाफा राखेर कारोबार गरे पनि सरकारले अहिले सम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । अधिकाशं बस्तुको उत्पादन गर्ने चौधरी समुहले विश्व बजारमा आफ्नो उद्योग स्थापना गरेपनि देशमा भने राजस्व छली गर्नमै माहिर मानिन्छ ।
नेपालमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्नु कालोबजारी हो भनेको छ । तर नेपालका घरानियका कम्पनीले उत्पादन गर्ने बस्तु र बिक्री गर्ने सामानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा राख्दै उपभोक्तालाई लुटी रहेका छन् । उपभोक्तालाई लुटेर जम्मा गरेको अकुत सम्पत्तिलाई गैरकानूनी तबरबाट विदेश लैजादै गरेका छन् । सबैजसो ब्रान्डमा अनुचित मुनाफा राखिएको छ ।
यो धन्दा वर्षाैंदेखि चलिरहेको छ । वर्षांैदेखि सञ्चालन भइरहेको तर हालै सार्वजनिक भएको मात्रै हो । नेपालमा यसरी धन्दा चलाउने गिरोह नै रहेको पनि रहस्य खुल्दै आएको छ । चौधरी समुहलगायत अन्य समुह मिडियासँग फेस गर्नै समेत चाहादैनन् । लुटको यस्तो साम्राज्यनै चलाएका छन् । राजस्व कर छलीमा चौधरी ग्रुपको नाम नै काफी छ । अरु परिचय चाहिँदैन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्ष समेत भई सकेका विनोदले पुनः महासंघको नामबाट अबैध करोबारलाई निरन्तरता दिन खोज्दा अध्यक्षमा हारेपछि रातारात नेपाल उद्योग परिसंघ गठन गरि अध्यक्ष समेत बनेका चौधरीको अधिकाशं धन्धा अबैध कारोबार गर्ने र सरकारी ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कर राजस्व नक्कली विलबाट ठगी गर्ने नै रहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वाइवाई चाउचाउ र अन्य उत्पादनबाट अर्बको कमाई गर्ने चौधरी गु्रपले आयकर र भ्याट भने नगन्यमात्रामा बुझाउदै आएको छ ।
सरकार चौधरी समुहको हुण्डी खाएर अर्बै रुपैयाँको राजस्व छली गर्दा समेत अझै छानविन र अनुसन्धान गर्दैन् । कारण सो अनुसन्धान गरेको खण्डमा मासिक रुपमा आउने रकम र मदिरा र अन्य सेवासुविधा समेत कटौती हुने भएपछि सो समुहमाथी सरकारी कर्मचारी अनुगमन गरेर कारबाही गर्न आँट समेत गरेको छैन ।
जबसम्म सरकारी कर्मचारीमाथी देशको जिम्मेवारी बोध हुदैन र कर छली गर्नेमाथी सवैलाई एकै प्रणालीबाट कारबाही नगरेसम्म चौधरी समुह जस्ता अन्य समुहसमेतले कर छली गरेकोमा नौलो नमान्दा हुन्छ ।
देशलाई जो कोहीले पनि कर बुझाउनु पर्छ र कर छलीको विषयमा कलम चलाउदाँ हैशियत नभएको भन्दै साकिले बन्ने हाम्रा परममित्रहरुलाई धन्यबाद दिन छुटाउनु हुदैन । जय होस ।
1,दागी व्यक्ति हुन् ! चौधरी र देउवाको लगनगाँठो कस्सियो
2,रामशरण र महेशलाई पन्छाउन देउवाले च्यापे चौधरी ! 'बन्लान त भावी अर्थमन्त्री ?'
3,बिनोद चौधरीको प्वाँख पलायो, दलका एजेण्डा भन्दा व्यक्तिको चर्चा !
4,प्रतिष्ठित व्यापारीका नाममा मुलुक खोक्रो पार्ने मेसो ! छानबिन गर्न पनिगाह्रो किन ?
5,अर्वपति सक्रिय राजनीतिमा आएपछि अपराधिकरणबाट व्यापारिकरण !